Zombies vs အပင် | အန်းဒရွိုက်သည်နောက်ဆုံးပေါ် APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Zombies vs အပင်: Cheat Code, သိကောင်းစရာများ & Tricks
Zombies vs အပင်: Cheat Code, သိကောင်းစရာများ & Tricks APK ကို
သငျသညျမဟာဗျူဟာနှင့်စွန့်စားမှုဂိမ်းချစ်ကြလျှင်, ဖုတ်ကောင် vs အပင်ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ထိပ်တန်းစာရင်းအပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အနားမှာ 50 ကွဲပြားခြားနားသောအပင်၏ဗိုလ်ခြေနှင့်တကွ, သင်သည်သင်၏မြက်ခင်းချိုးဖောက် wacky ဖုတ်ကောင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆင်းကိုလိုက်ရှာဖို့ရှာပုံတော်အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။
စဉ် အပင် vs Zombies စီးရီးမူရင်းဗားရှင်းနေဆဲပျော်စရာအပြည့်အဝဖြစ်ပြီး, ယခုအားဖြင့် Android အတွက်အများကြီးခေါင်းစဉ်ကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ ပစ်လွှတ်၏ထိုအချိန်က, ဒီအေးမြခြင်းနှင့်စွဲလမ်းဂိမ်းအတှကျအိပျညတွေအများကြီးနှင့်အတူ၎င်း၏ကစားသမားထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ သူကပြောပါတယ်နဲ့အတူကျနော်တို့က၎င်း၏ဂိမ်းကစားဖို့ပိုပြီးပျော်စရာ add ဖို့နေရာလေးကို cheat codes တွေကို, အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်အချို့ကိုဝေမျှဖို့သွားနေကြပါတယ်။
သူတို့အား creepy ဖုတ်ကောင်နှုတ်ခမ်းမွေးသို့မဟုတ်နေကာမျက်မှန်ကခုန်သို့မဟုတ်ဝတ်ထားစေလိုပါသလား? စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်တပ်များ၏အဆင့်ကို add နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ Popcap ဂိမ်းများအားဖြင့် added အဆိုပါ cheat codes တွေကို၏အနည်းငယ် (အီစတာကြက်ဥ) ကဆက်ပြောသည်ပါပြီ။
သင်တို့သည်ဤ codes တွေကိုအလုပ်အချို့ကိုအောင်တိကျတဲ့အဆင့်မှာချဲ့ထွင်ရန်ဥာဏ်ပညာသည်သင့်ရဲ့သစ်ပင်စောင့်ဆိုင်းသင့်ကြောင်းသတိရပါ။ အားလုံးသင်သည်ထိုသူတို့အလုပ်မလုပ်စေဖို့အတွက်ဂိမ်းပေါ်ဤအကြောင်း cheat codes တွေကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့; သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့် cheat code ကိုတရားဝင်သည်ရှိမရှိရှာဖွေပညာသည်သင့်ရဲ့ပင်၏အမြင့်ကိုသိပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, နောက်ထပ်ဒီမှာစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ cheat codes တွေကိုနှင့်ဂိမ်းထွက်လှည့်စားရန်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုအချို့ရှိပါသည် -
အနာဂတ် - ထိုဖုတ်ကောင်မှအနာဂတ်အရိပ်ထည့်ပေးသည်။
Pinata - တစ်ဖုတ်ကောင်သတ်ဖြတ်ပြီးနောက်ဟယ်လိုသကြားလုံးရေချိုးခန်းကိုကြည့်ပါ။
ကခုန် - ကဖုတ်ကောင်ကခုန်စေ။
Trickedout - တစ် lawnmower ၏ခြုံငုံကြည့်ပြောင်းလဲပါ။
လုပ်ပေးဖို့ - ဖုတ်ကောင်သေဆုံးသည့်အခါငယ်လုပ်ပေးဖို့ကိုကြည့်ပါ။
Slowboke - ထိုဖုတ်ကောင်နှေးကွေးစေရန်။
Tohot - အဆုံးမဲ့နေရောင်သည်။
နှုတျခမျးမှေး - ထိုဖုတ်ကောင်ရဲ့ပါးစပ်အပေါ်နှုတ်ခမ်းမွေးတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း။
သင့်ရဲ့ Survival အဘို့အခွင့်နှင့်အနိုင်ရရှိမှုကိုတိုးပှားမှသိကောင်းစရာများ & Tricks
ပိုပိုပြီးနကွောတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း - နေကြာဂိမ်း၏စိတ်နှလုံးဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီမှာညအချိန်ဖြစ်ပြီးသင်သည်များစွာသောနကွောရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအထူးသဖြင့်လျှင်, အသင်တို့သည်နောက်တဖန်ဦးနှောက်-ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖုတ်ကောင်ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့မြက်ခင်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပေမည်။
ဒါကြောင့်သင်ကစွမ်းအင်ကိုစုဆောင်းပစ်ခတ်မှုအပင်ကိုထည့်သွင်းဖို့ကြီးထွားလာအလုံအလောက်နကွောအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ သူတို့သည်အလွန်လုံခြုံနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာမြက်ခင်း၏နောက်ကျောများတွင်နကွောအနည်းဆုံး2တန်းစီရှိသည်ဖို့သေချာပါစေ။ ပထမဦးဆုံးအဖုတ်ကောင်အထိပြသထားတယ်ပြီးတာနဲ့စက်ရုံပထမဦးဆုံးဖုတ်ကောင်ချွတ် 3.5 ရင်ပြင်တစ်ဘုံပဲသေနတ်သမားတက်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စက်ရုံစားမတိုင်မီဒါဟာဖုတ်ကောင်သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏အချိန်ကိုတက် add ပါလိမ့်မယ်။
ဖုတ်ကောင်အမျိုးအစားသည်နှင့်အညီအပင်ကို Select လုပ်ပါ approaching-
သင်တစ်ဦးအဆင့်ကိုမစတင်မီရင်ဆိုင်ရမယ့်ဖုတ်ကောင်များ၏အဘယျသို့အမျိုးအစားများကိုစစျဆေးဖို့သေချာပါစေ။ ဤနည်း, သင်အဆငျ့အဘို့အညာဘက်အပင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျအခြို့သောအထူးဖုတ်ကောင်သတ်ပစ်ရန်တိကျသောအပင်လိုအပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ကြိုးဖုတ်ကောင်ရိုက်ပုတ်မြတ်သောစက်ရုံရှိသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ almanac မှာကြည့်ပါ -
သင်တစ်ဦးဖုတ်ကောင်ကိုသတ်ပြီးတာနဲ့က almanac မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးဖုတ်ကောင်များ၏အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတာမသိလျှင်, ရိုးရှင်းစွာ almanac စစ်ဆေးပါ။ သင်အားနည်းချက်ကျန်ရစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်အပင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။
Yeti ဖုတ်ကောင်သင့်အားသာချက်မှသုံးပါ -
Yeti ဖုတ်ကောင်သင်၏စုဆောင်းမှု၏မျက်နှာကို ထောက်. အလွန်အထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ချစ်စရာဖုတ်ကောင်သည်အလွန်ရှားပါးသည်။ ကိုယ်ကသာအဆင့်ကို (4-10) တွင်တွေ့သည်။ သငျသညျအဆငျ့ဖြည့်စွက်တစ်ချိန်ကဒါဟာဝေးတတ်၏။ သို့သျောလညျးသငျသညျ3စိန်စုဆောင်းဖို့ yeti နောက်တစ်ကြိမ်စိုက်ပျိုးနိုင်။ ယင်း preview ကိုမ Yeti ဖုတ်ကောင်လည်းမရှိလြှငျ, ဂိမ်းကိုပိတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဂိမ်း restart ချလိုက်ပါ။ yeti ဖုတ်ကောင်များလွန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသမုတ်သောပါကဝေးပြေး။ ဒါကြောင့်သူ့ကိုကြာကြာနေဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်နှောင့်နှေးစေခြင်းငှါသူတို့နောက်ကွယ်ကအခြို့သောအပင်ကိုစောင့်ရှောက်။ အဆင့် pass နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ် yeti ဖုတ်ကောင်လယ်ယာကိုစောင့်ရှောက်ရန်မသွားပါစေပါနဲ့။
"ပြီးခဲ့တဲ့ရပ်" Mini-ဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်ငွေရှာ -
ဒါဟာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် အပိုငွေဝင်ငွေ မြန်မြန်။ ဖြစ်ပြီးအဆင့်ရှင်းလင်းသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်လျှင်ကအရေးမပါဘူးသကဲ့သို့သငျရုံဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ရွှေသံလိုက်အားလုံးရွှေဆွဲဆောင်နှငျ့သငျနှစျခုအလံသူ့ဟာသူအတွက် 5k အထိစုဆောင်းထားနိုင်ပါတယ်ကွပါစို့။
ဇင်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိအပင်များအတွက်အခန်းတစ်ခန်း Make -
ယင်းဇင်ဥယျာဉ်၌သစ်တစ်ခုစက်ရုံနေရာအနည်းဆုံးတဦးတည်းအစက်အပြောက်ချန်ထားပါ။ ကတက်ပြည့်စုံသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ဂိမ်းကို exit နှင့်အခြားစက်ရုံအပင်တစ်ပင်ရောင်းချနေခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်လျှင်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီး-အခမဲ့ရယူပါ။ 10 ချောကလက်တည်ရှိလည်းရှိပါတယ်။ သငျသညျချောကလက်၏တစ်စက်ထက်အပင်တစ်ပင်ရှိသည်ဖို့မလိုချင်ပေမည်။ သင်တို့သည်လည်း "Whack-a-ဖုတ်ကောင်" လို့သင်္ချိုင်းကိုအသီးအသီးအချိန်အထိဝါးတူနေတဲ့ဆုကြေးငွေဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။
သင်ရုံသင့်ရဲ့အပင်များနှင့်ရှိသမျှသောပစ္စည်းများကြီးထွားဖို့စောင့်ဆိုင်းနေမုန်းလျှင်နေ့အဘို့ Crazy Dave ရဲ့ဆိုင်မှာရောင်းထွက်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်အစာရှောငျ-forward ပြုလုပ်ပေးဖို့အချိန်ကိုအချိန်ပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့, ဒီစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအပေါငျးတို့သပစ္စည်းများ refill ရန်နှင့်သင်နက်ဖြန်နေ့၌အဘို့အစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုပါသည့်လှည့်ကွက်သည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာအားလုံးသင့်ရဲ့အပင်တွေနေ့အဘို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ရေလောင်းရပါမည်။ app ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ က Settings> System ကို> Date & Time သွားပါ။ ခလုတ်ကို "အလိုအလျောက်ရက်စွဲ & အချိန်" ကိုချွတ် toggle ။ ယခုတွင်သင်သည်လာမည့်ရက်စွဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ဂိမ်းကိုဖွင့်ပြီးတက်စိုက်ပျိုးသင့်ရဲ့အပင်တွေကိုကြည့်ပါ။ အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်ရှိလက်ရှိနေ့စွဲနှင့်အချိန်မသတ်မှတ်ဖို့ "အလိုအလျောက်ရက်စွဲ & အချိန်" တွင် toggle ။ အချိန်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့မတိုင်မီစနစ်တကျ app ကိုပိတ်ဖို့ရန်သေချာစေပါ။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာကြိုးဖုတ်ကောင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, ထီးအရွက်သင့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါကြိုးဖုတ်ကောင်ကလိုလားမည်သည့်ကျပန်းစက်ရုံခိုးယူနိုင်ပါတယ်အဖြစ်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လုနီးပါးအားလုံးအပင်အနည်းဆုံးလေးထီးရွက်ကိုတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအရွက်3×3စတုရန်းအတွက်အပင်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ဝေးနေဖြင့်ဤပိုရှည်ရှင်သန်နှင့်ဖုတ်ကောင် vs အပင်အတွက်အဆင့်ဆင့်အနိုင်ရဖို့အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်တချို့ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့အထက် cheat codes တွေကိုသင့်ရဲ့ဂိမ်း ပို. ပင်ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်စေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်သံသယရှိပါကအောက်ပါမှတ်ချက်အပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်းဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။
Zombies အခမဲ့ vs. အပင်
သေလွန်သောသူတို့သည်ပစ်မှတ် Mod ...
ဖုတ်ကောင်, Run! (အခမဲ့)
Zombies ဂိမ်း vs အပင် Zombies ဂိမ်း App ကို vs အပင် Zombies ဂိမ်း App ကို Android မှာ vs အပင်